बोर्ड सदस्य ऋषिराम दाहाल भन्छन् - क्यान आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री भो (अन्तर्वार्ता ) - Ankuran Khabar
बोर्ड सदस्य ऋषिराम दाहाल भन्छन् – क्यान आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री भो (अन्तर्वार्ता )
२०७८ पुष ८0
पछिल्लो एक साता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले चार खेलाडी माथि गरेको कारबाही विवादमा परेको छ । क्यान, खेलाडी र समर्थक मात्रै हैन, गठबन्धनको सरकारले समेत यो घटनालाई निकै चासोका साथ हेरेको छ । क्यानको २९ मंसिरमा बसेको बोर्ड बैठकले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कमलसिंह ऐरी र सोमपाल कामीलाई आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय सम्झौताबाट ६ महिना बाहिर राख्ने र कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
यस पछि चारै खेलाडीले क्यानलाई कारबाही पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै उनीहरुलाई सहयोग गर्दै अन्य खेलाडीले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले स्वेच्छाचारी ढंगले क्यान चलाएको, आर्थिक अनियमितता गरेको, प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । यिनै विषयमा क्यानका सदस्य ऋषिराम दाहालसँग गरिएको कुराकानी :
तपाई सहित ६ बोर्ड सदस्यले खेलाडीको कारबाही फिर्ता होस् भन्ने माग राख्नु भएको छ । आवश्यक थियो ?
तीन महिना पछी हामी ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछौं । यस अघि हामीले जुन लेभल – १ प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई जोगाउनुको ठूलो चुनौतीको विषय हो । यस्तो अवस्थामा खेलाडीलाई खेल खेलाउन प्रोत्साहन, प्रेरित गर्ने समयमा खेलाडीमा थि कारबाही गर्दा हाम्रो लेभल जोगिन्छ कि जोगिँदैन रु र, खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अधम्य अपराध गरेका हुन् रु त्यो विषय आउनु पर्‍यो । उनीहरूले चित्त नबुझेका कुरा राख्दैमा खेलाडीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।
उनीहरूले यस्तो हुनुपर्छ । यो काम गर्‍यो । यस्तो गर्‍यो भनेर आवाज उठाएका छैनन् । क्या नविरुद्ध नाराबाजी गरेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना माग राखेका छन् । ग्रेडिङमा समस्या छ सच्चाउनु पर्‍यो भनेका छन्। यति भन्दैमा एकैचोटि खेलाडीलाई कारबाही गर्ने रु कप्तान उपकप्तानलाई निकाल्ने रु चार खेलाडीलाई ग्रेडिङमा नराखी भोको पेट खेल खेल भन्ने । जो राष्ट्रका लागि खेलिरहेका छन्, उनीहरूको मनोबल बढाएर लेभल – १ जोगाउनु पर्ने बेलामा खेलाडीलाई पिटेर तर्साएर लेभर वान जोगिन्छ त ?
क्यानले खेलाडीले आचार संहिता उल्लंघन गरेकै हुन् भनेको छ । तपाईहरूको कुरा फरक देखियो नि ?
हामी खेलाडीसँग टचमा छैनौं । खेलाडीले अनुशासन भंग गरे कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । अनुशासनको कारबाही सबैको पक्षमा छ ।बोर्डले आफूले गरेका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुको साटो खेलाडी माथि प्रहार गर्नु भयो । कसैलाई कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनु पर्छ । खेलाडीले खेल्ने हो, राजनीति गर्ने हैन । लेभल वान जोगाउनु छ । यो ठाउँमा पुग्नु हाम्रो गन्तव्य हो । खेलाडीले यी यी कुरा चाहिन्छ भनेर माग गर्दा माग राख्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।
अहिले हामी डिसेम्बरको अन्तिम तिर छौं । जनवरीबाट २०२२ को ग्रेडिङ हुनु पर्छ । नयाँ ग्रेडिङ हुनु पर्छ । अब, उनीहरुको ग्रेडिङको समय सकिसक्यो । बरु २२ को एक दुई महिनाअघि नै ग्रेडिङ गरेर सकौं । कप्तानसँग सल्लाह गरौं । कप्तानलाई पनि आफ्नो टिममा को कस्तो छ ? को घाइते छ ? कसलाई के समस्या छ ? धेरै थाहा हुन्छ । हामीले कप्तानसँग सल्लाह भयो भनेर सोध्यौं । किन गर्ने भन्नु भयो । यी कुरा भएकाले हामीले खेलाडीको पक्षमा खुला दिमागमा सोचेर हामीले कुरा गरेका हौं ।
खेलाडीले गुट बनाएर आफूअन्तर्गतकालाई समेटेर हस्ताक्षर गरेर क्यानलाई ११ बुँदे माग राखे भन्ने कुरा छ ?
१४ खेलाडीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् । हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने राम्रोसँग खेल्न सक्छौं । नेपालको नाम राख्न सक्छौं । हामी लेवल वान जोगाउन सक्छौं भन्नु कसरी दबाब भयो रु यदि यो भएको वा गरेको हो भने, जबर्जस्ती हस्ताक्षर गरेका हौं भन्ने खेलाडी आउनु पर्‍यो । क्यानका पदाधिकारीले धम्काएर खेलाडीलाई जबर्जस्ती खेलाडीकै विरुद्धमा बोल्न लगाएको सुन्नमा आएको छ। खेलाडीकै विरुद्ध क्याम्पेन गर्न लगाएको, दुनियाँ ठाउँबाट दबाब दिएको भन्ने सुन्नमा आाएको छ ।
तपाईहरू पनि सुदृढीकरणको बहानामा क्यानलाई पेलेरै जान लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
अब क्यानको साधारणसभा आउँदैछ । के गर्नु हुन्छ ?
प्रशिक्षक भट्ट भन्छन् – शान्ति र सुनिताको प्रदर्शनले खेल जित्यौं
किताब जात्राले नयाँ दिल्लीबाट सुरु गर्‍यो विश्व यात्रा